Muuqaalada Agaasimaha Aero
Muuqaalada Agaasimaha Aero 2 sano 1 bil ka hor #1103
Nalalka iftiinka beelka ma shaqeeyo. Nalka korantada laydhku wuxuu xakameeyaa labada laambarka iyo nalalka. Waxaan u qaatay in khaladaad qaabeynta ah maadaama cfg ay u muuqato in si sax ah loo dejiyay. Wax talo soo jeedin ah?
Muuqaalada Agaasimaha Aero 2 sano 1 bil ka hor #1105
Ha !! Waxaad ogaan doontaa in qaar ka mid ah nalalka beakon ee cfgs kaladuwan ay leeyihiin .fx ku lifaaqan dhamaadka soo galida cfg; qalad cad. Moodeellada kale ee sida 680-na ma hayaan nalalka iftiinka. Dhamaan waxaa lagu sixi karaa shaqo yar.